Adihevitra 3 novambra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
[TTF. Ireto ireo nifanatrika tao : Marcellin Andriantseheno (7), Ny Rado Rafalimanana (11), Andry Rajoelina (13), Andrianoelison Jose (15), Eric Rajaonary (17), Marc Ravalomanana (25)]
Nanaraka ilay adihevitra aho ka ho ahy dia ny N°11 no nandresy nivoaka mpandresy rahefa dinihana amin’ny saina tony sy maso tsy miangatra ny resak’izy enin-dahy. Manaraka ny N°25 izay arahan’ny N°13. Ny N°15 no fahefatra, manaraka azy ny N°7 ary ny N°17 no mamarana azy.
Tsy tokony ho nifaninana ny N°7 sy ny N°17 amin’ny ankapobeny. Ohatry ny maheno mpinamana, na mpianakavy na mpiara-miasa na mpitaingin-tamboho miresaka nihaino azy roalahy. Ohatra : "Mitovy hevitra amin-dRanona aho", sy ny teny maro hafa toy izany izay fanao rahefa mandany andro mivorivory ny Malagasy. Tsy amina adihevitra fifidianana filoham-pirenena no tokony hisy izany. Ny fandaharan’asa tohanany, samy lazain’izy roalahy fa misy itoviany amin’ny an’ny hafa. Diso fifidianana izy roalahy ireto.
Inona no antony maha fahefatra ny N° 15 ? Manana traikefa sy fahaiza-manao azo antoka izy. Sahiny koa ny namerina ny adihevitra tamin’ny laoniny rahefa nifanenjana ny N°11 sy ny N°13 ary ny N°25. Don-databatra milaza fa tsy ny adin’izy ireo no atrehina fa ny ho avin’i Madagasikara, sy ny fiainan’ny Malagasy amin’ny dimy taona manaraka. Tsapa koa tamin’ny famelabelarana nataony fa olona voasedra izy amin’ny raharaham-panjakana. Fa ny nampiavaka azy indrindra dia ny fandaharan’asany izay mikatsaka ny haha-masimandidy ny Malagasy ao Madagasikara ka ho tonga Nosy sambatra. Tsapa koa fa mitodika manatrika ny zava-misy sy ny hoavy ny fandaharan’asany. Ambonin’izany ny fahafantarana fa fandaharan’asa azo antoka ny famatsiam-bola azy no natolony. Roa ihany ny mpifaninana manana izany amin’izy 36 mpifaninana.
Tsy tomombana tsara anefa ny fifehezana ny serasera amin’ny adihevitra politika no mahatonga azy ho fahefatra. Ohatra : tsy lany ny telo minitra farany hamintinana ny hafatra. Tsy nisy filazana tamin’ny mpihaino ny laharan’ny kandida. Izay mpomba azy ihany no mahalala fa N°15 izy.
Fahatelo ny N°13. Tsy misy azo kihanina ny seho ankapobeny. Voafehy na ny fiteny na ny fihetsika. Ny endrika ivelany, ny fidoboky ny feo. Ny famerimberenana ny IEM. Saingy fahatelo izy noho ireto manaraka ireto. 300 pejy hono ny IEM. Mino aho fa na ny vadiny aza tsy nahavaky izany. Be hambo ny IEM fa tsy fantatra izay hanatanterahana azy. Ohatrinona ? Volan’iza ? Avy aiza ? Faharoa : nahazo veli-kanota mafy tokoa izy rahefa niditra tamin’ny pataloha terin’ny fanonganam-panjakana sy ny "puce" izay natao ho an’ny jamoka. Hita ho nangasihasy mihitsy izy tamin’ny valin-kafatra avy amin’ireo mpifaninana roa hafa momba izany. Fahatelo : be ny angolan-teny nampiasainy nefa dia tsy afaka mihitsy ilay mikobana noho ny tsy fahafenoana. Farany : nanana fotoana betsaka izy namehezany ny resany, saingy indrisy fa tsy vitany ny nampangina ny "alahelony", fa tsy maintsy nanao fihantsiana ny N°25 izy, izay nanamaloka tanteraka ny resany rehetra teo aloha.
N°25 no faharoa. Tsy ho voalohany mihitsy izy tamin’iny adihevitra satria tsy fanao ny miaka-tsehatra rahefa fari-peo. Tokony ho nanontany an’i Bodo izy momba izay azo atao hitazonana ny feo. Indraindray toa mikiakiaka, indraindray toa manao feo-na sarim-bavy. Midika koa anefa ny feony farina fa izy irery no nikely aina nanao fampielezan-kevitra. Izy sy ny N°15 irery koa no manana fandaharan’asa fantatra fa misy famatsiambola mazava : Manifesto. Mbola noporofoiny koa fa olon’ny asa izy fa tsy manao hevitra taingina. Ohatra: ho tohizana ny fanamboaran-dalana. Iza tokoa no sahy hilaza fa tsy ilaina ny lalana. Na hoe tsy nahavita lalana izy. Tsy nisy sahy nitsikera izany ny mpifaninana taminy. Olona miatrika ny olana misy sy mijery ny eo aloha no manamboatra lalana. Tsapa koa fa tsy nandevin-tsotro be izy na teo aza ny sakana nahazo azy sivy taona lasa izay. Tsy nampoiziko ho niomana ny hamaly ny fanakianana mety hipoitra tamin’iny adihevitra iny koa ny N°25. Ohatra : nolazain’ny N°13 izy fa nametra-pialana fa tsy nisy izany fanonganam-panjakana izany. Novaliany teo no eo fa tsy nametra-pialana izy fa namindra fahefana tamina manamboninahitra telo. "Fantatro, hoy izy, ny taratasy nataoko sonia". Tankina ny N°13. Izy irery koa no mpifaninana mamerim-berina, ombieny ombieny ny N°25, satria fantany fa ny famerimberenana no fomba fampianatra sy fianarana ary fampitana hevitra ny hafatra tsara sy mahomby indrindra.
Ny N°11 no voalohany tamin’iny adihevitra iny. Nomeny ny daka ambava-fo sy tefaka mandrivorivo izay hamela holatra sy takaitra tsy ho voafafa mandrakizay ny N°13. Izay porofo fa voafehiny ny fomba fanao amin’ny seraseran’adihevitra politika toy ireny. Ohatra : alefa misotro ronono ireo mpanao politika ela nihetezana. Ohatra koa ny fanontaniana momba ny zavatra izay natsangany (N°13) izay novaliany fa may tamin’ny 26 janoary. Valiteny tsy mihoatra izany. Fa mbola avy amin’ny koa no azo amehezana iny adihevitra iny rahefa nilaza izy fa ireo mpitondra teo aloha no tsara asiana "puce" fa tsy ny omby. Hipetraka ho tantaran’ny N°13 iny valy boraingina iny. Takon’iny avokoa ny fahelemen’ity N°11 ity, izay maro be tokoa. Isan’izany ny fandaharanasany izay hevi-dravina no betsaka. Ohatra : ny "Ala olan-dRatsimandrava". Mety ho nahomby tamin’ny 1975 ny "Ala Olana", fa tsy amin’izao 2018 na 2019. Mitodika any aloha no mandeha ny tantara fa tsy any aoriana. Tsy sakanana izy raha te hiverina rahefa izay no safidiny.
TAMPINA NY DAOMY
Ô ry ingahy mpanoratra a, mba ilazao vaovao
Fa toa nisy adihevitra be hono, tao am' tele tao
Ny soratsoratrao manko, no hany mba mampita
Ireo vaovao lehibe, iniana afenina tsy ho hita.
Nafana tokoa ny adihevitra, ary tena nisy ankamely
Nataon-dry zalahy tambabe, 'lay boaikely tsy mamely
Nanontany manko lery hoe, "mba inona moa ry Mose Rado
No mba zavatra mba tsara, sy 'zay mba vitanao teto Dago?"
Fa ny valiny avy any, tonga dia fantsy nandrivorivo
"Nanana orinasa aho, fa nodoranao tamin'ny sivy sy roa arivo"
Tampina ny daomy, fa kendakenda i boaikely
Raha "nozomena" ny sary, dia nitempotempo ilay lohamalemy.
Dia nitohy ny adihevitra, ka ny tena nahagaga
Voaisan'ilaiàka, ny omby rehetra eto Gasikara
Avy eo mbola nipentsona, nilaza ilay hoe omby hasiana "pisy"
Fa nomen'i Rado ny savaty : "ianao io no tokony hasiana pisy mihitsy"
Dia nivandravandra i boaikely, amin'ilay maso somary gila
Tampina indray ny daomy, ny azony natao dia ny nangina.
Fa nisy fantsy iray nanindrona, nalefan'ingahy Zozekely
Nampihivingivina mihitsy, ny tarehan'i boaikely :
"Ny anao izao omby izao foana, no kendrena hasiana pisy,
Anefa be dia be ny zaza gasy, tsy manana kopia mihitsy"
Niefonefona i boaikely, saingy tsy nanana navaly
Tampina iny daomy iny, ka nitanondrika i Mialy.
Ny an'i dada koa direkta : "mampalahelo ity TVM ity,
Tena tsara izy ity taloha, fa nodoran'ingahy iry"
Fa naresaka ilay efitrano, nikakakaka ny mpijery
Niandry indrindra izay havaly, sy ny haromotan'i boaikely
"Fanonganam-panjakana foana, no averimberinao
Anefa ianao nanao sonia, tao Iavoloha tao"
Namaly i dada, tena hentitra : "haiko izay nosoniaviko,
Fa namindra fahefana aho, ny ankoatra izay kosa laviko
Matoa tsy nisy nankatoa anareo, ny Sadeky sy ny sisa
Dia fanonganana no nisy teto, fa aza ilaozana mampandry adrisa
Tsy mba nisy "kidnapping", tamin'ny andro nitondrako
Fa rehefa tonga teo ingahy iry, d'injao nisesy tsy niato"
Ny valin-teny avy any : "kidnapping ekonomika"
Olona no nosamborina, ny an'i leiry kosa alika.
Lavabe raha hotanisaina, f'izay izy raha fintinina
Nivoaka ny efitrano leiry, tena hita fa laginina
I Mialy aza moa, tsy nitsikitsiky mihitsy
Rakotry ny henatr'olona, k'indrisy nitampifimpify.